INCUBATOR HAGAHA FIICAN: SHARAX, TUSAALOOYIN, ASTAAMO, BARID, FAA'IIDO IYO FAA'IIDO DARO - KUFSI
Meelo badan oo guryaha laga isticmaalo, mid ayaa maqli kara hubbub aan kala go 'lahayn: Haamo, xayawaan shimbiro ah, duufsasho guntan, iyo qaylo dhoobo ah. Si aan u iibsan shimbiraha yar yar gu'ga kasta, milkiiluhu wuxuu faa'iido badan u leeyahay inuu shimbirta ka qaato beerkiisa. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad iibsato qalab sida naqshadeeye.
Bal aynu eegno Isku-xireyaashakaas oo ay sameeyeen shirkadda Novosibirsk ee "Bagan". Aynu barno faa'iidooyinka iyo khasaarta qalabkan, waxaan si faahfaahsan u sharxi doonaa sida loo isticmaalo.
Kufsi "Dhar fiican" xuduudaheeda ayaa ku haboon guryaha guryaha digaaga. Iyada oo kaalmayntu waa sahlan tahay in la cuno chicks ee shimbiraha sida sida:
digaagga iyo berriga;
ducks iyo turkiga;
digaagduur, duufaanno, calaacal iyo xamaarad;
hawdka iyo guinea guinea.
Qalabka kaadida ayaa laga sameeyaa xumbo cufan, waxay leedahay qiyaas yar iyo miisaan hooseeya. Taarajyada kulaylka ayaa lagu daboolayaa daboolka sare ee maskaxda, kaas oo u oggolaanaya diin ahaan in si siman loo kululeeyo.
Ma taqaanaa? Miyuu digaaggu ku neefsada qolofka? Qoryaha waaweyn, qolof qaro weyn ayaa runtii loo oggol yahay gaasaska. Oxygen wuxuu galaa embriyaha iyada oo loo marayo habdhismeedka qolofta, qoyaanka iyo kaarboonka dioxide ayaa laga saaraa. On ukunta digaaga waxaad tirin kartaa in ka badan toddoba kun oo indhaha ah, kuwaas oo intooda badani ay ku yaalliin dhamaadka caanaha.
Hababka caanka ah
Shirkadda Novosibirsk ee "Bagan" waxay soo saartaa kulubka "Ideal hen" saddex qaybood:
model IB2NB - C - waxaa lagu qalabeeyaa xakamaynta heerkulbeegga elektarooniga ah, ukunta digaagga ah waxaa lagu dhejin karaa marba mar, afgambigu waxaa lagu sameeyaa gacanta;
IB2NB -1Ts model - marka laga reebo maaraynta heerkulka elektarooniga ah waxaa jira qalab farsamo ah oo loo marayo. Awoodda 63 ukumood ayaa la bixiyaa. Marka la eego, isticmaaluhu wuxuu kordhin karaa booska loogu talagalay soo saarida ukunta laga bilaabo 63 gogo 'ilaa 90 gogo'. Si arrintan loo sameeyo, ka soo saar qalabka casriga ka soo-qaboojiyaha oo u beddel gacan iyaga;
Tusaale IB2NB -3Ts - wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinka labadii koowaad iyo ku darida foomka microcontroller iyo gaaban oo gaaban oo loo yaqaan (4 saacadoodba).
Miisaaniyadaha soo haray ayaa ka duwan saddexda hore ee ugu horreysa ee awoodda qalabka iyo isticmaalka awoodda. Qiyaasta qalabka waxay ku kala duwan tahay qaab kasta.
Qalabka kuleylka "Ideal hen" waa qalab jaban, astaamaha farsamo ee u dhigma xaqiiqda ah in qalabka loo isticmaali doono guriga:
waxa ay leedahay difaac biyaha iyo hadda (Fasalka II);
adigoo isticmaalaya kuleylka, waxaad hagaajin kartaa heerkulka (+ 35-39 ° C);
saxsanaanta ilaalinta heerkulka qalabka ilaa 0.1 ° C;
qalabku wuxuu ku shaqeeyaa 220 qalab (caanaha) iyo 12 qalab (batari);
Qiyaasaha "Incubator" waxay ku xiran tahay nooca: width - min 275 (max 595) mm, dhererka - ugu badnaan 460 (max 795) mm iyo dhererka - min 275 (max 295 mm);
miisaanka qalabka ayaa sidoo kale ku xiran xulashada la kala doortay oo u dhaxaysa 1.1 kg ilaa 2.7 kg;
Awoodda qalabka - laga bilaabo 35 gogo 'ah ilaa 150 gogo' (waxay ku xiran tahay habka loo yaqaan 'incubator').
Baro wax badan oo ku saabsan sifooyinka soo koraya: Ducklings, turkiga, poults, quail, digaagga iyo goslings ee kululaynta.
Shirkaddu waxay damaanad qaadeysaa sanadka koowaad ee qalabka iyo shahaadada. Waxay bixisaa wadarta guud ee hawlgalka ilaa 10 sano. Waxaa ku jira khubaradu waa buug-gacmeed iyo qalab dheeraad ah:
bacaha caaga ah ee ukunta;
gawaarida xamuulka (miisaanka sida ku cad tusaalaha);
qalab loogu talagalay ukunta (sida ku cad tusaalaha);
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka "Hibiska Fiican"
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee soo saaraha hoyga "Ideal hen" waxaa ka mid ah:
miisaan yar oo qalab ah: waxaa si fudud loo beddeli karaa oo loo wareejin karaa hal qof iyadoon wax caawimo ah;
kiisku wuxuu ka samaysan yahay xumbo cufan, wuxuu leeyahay awood xoog leh oo uu ku cadaadiyo cadaadiska farsamada ilaa 100 kg;
Isku-shaandhaynta isku-midka ah ee kuleylka, taas oo ay sabab u tahay taarikada kulaylka ballaaran ee ku xiran daboolka maskaxda;
Isticmaalka awood yar;
xakamaynta joogtada ah iyo dayactirka heerkulka la dhigay heerkulbeegga;
awood u lahaanshaha inuu qalabka ka soo galo shabakada iyo bateriga (taas oo muhiim u ah marka korontadu ka baxdo);
joogitaanka qoraallada qoraallada saxeexan oo toos ah;
awood u lahaanshaha inay si muuqaal ah u kormeeraan xarriiqda aan lahayn fur-furka (iyada oo loo marayo daaqada);
xakameyn heerkuleed oo ku habboon duleelka qalabka korontada.
Waxaa jira waxoogaa cillado ah oo ka mid ah "Hibiska Fiican":
lambarada madow ee ku shaqeeya qalabka elektaroonigga ah waa ay adagtahay in habeenkii la arko: waxaad u baahan tahay mid ka mid ah daaqadaha dheeraadka ah, ama lambarrada kale ee midabka (cagaaran, casaan);
naqshadeeynta waa in lagu rakibo meel sida wareegga hawada (miis, kursi) ay ku dhaafi doonto hoosta qalabka hoosta;
Jidhka xayawaanka ayaa si aan fiicnayn ah ugu celin kara iftiinka qorraxda.
Ma taqaanaa? Digaaggu wuxuu leeyahay xagal aad u fara badan oo ka muuqda qofka - sababtoo ah indhihiisu waxay ku yaallaan dhinaciisa madaxa! Digaaggu wuxuu arkayaa waxa dhacaya oo kaliya isaga hortiisa, laakiin sidoo kale isaga ka danbeeya. Laakiin aragtida gaarka ah, waxaa sidoo kale jira faa'iido darro: waxaa jira meelo digaag ah oo aanuu arki karin. Si aad u aragto qaybta maqan ee sawirka, digaagga inta badan waxay madaxa ku garaacaan dhinaca iyo kor.
Sida loo diyaariyo kulubka shaqada
Ka hor inta aanad soo saarin dufan ukun ah si loo xoojiyo, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxqabadyada lagama maarmaanka ah:
Ku nadiifi gudaha qalabka dhismaha qashinka (caaga, qolofka) ka baxsan qandaraas hore.
Ku dhaq biyo diirran iyo saabuunta dharka, adoo ku daraya jeermi-dileyaasha si loo xaliyo nadiifinta.
Biyaha la karkariyey waxaa lagu shubaa qalab nadiif ah (karkarin waa qasab!). Si aad u buuxisid biyaha, grooves waxaa lagu siiyaa qeybta hoose ee qalabka. Ku shub ha ka sarreeyo dhinacyada. Haddii qolku aad u qalalan yahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad biyo ku shubto dhammaan afarta xudduud, haddii gudaha gudaha biyaha qashinka lagu shubo oo keliya laba (oo ku yaalla hoostiisa).
Waa lagama maarmaan in la hubiyo in baaritaanka dareenka kuleylka ah ee ku dul wareegsan ukumaha uusan taabanin qolkooda.
Kuleylaha waxaa lagu daboolayaa dabool, heerkulbeegga iyo habka soo jeedinta ayaa loo rogay (haddii lagu siiyo noocyadan) oo kululeynaya heerkulka ay soo jeediso soo saaraha.
Kuleylaha ayaa diyaar u ah in uu helo qalab kulul.
Quudinta ku habboon: digaagga, goslings, ducklings, broilers, digaaga iyo digaagga mooska maalmaha ugu horreeya ee nolosha - furaha guusha ku guuleysiga.
Diyaarinta iyo dhigista ukunta
Xulashada maadada loogu talagalay waa in marxalad aad u muhiim ah si loo helo natiijo wanaagsan.
ukumaha waa inuu noqdaa mid cusub (aan ka weyneyn 10 maalmood);
heerkulka ay ku kaydsan yihiin illaa ay kudhigaan naqshaduhu waa in aysan hoos udhicin +10 ° C, isdhaafka jihada dhinac kasta oo si wax ku ool ah u saameeya awooda uurjiifka;
yeelo embriyaha (rakibay ka dib markaad hubiso qoyaanka);
cufan, dhar (oo aan qarxin) qaab dhismeed qolof ah;
Ka hor inta aanad lahayn, qolofka waa in lagu maydhaa biyo diiran saabuun ama xal pink oo ciriiri ah oo kiriimiga ah.
Ka hubi Otoscope
Dhammaan ukumaha ka hor intaan la isugeynin waa in la hubiyaa joogitaanka embriyaha. In beerta digaagga this caawin doonaa qalabka sida sida ovoskop ah. Ovoskop waxay noqon kartaa labadaba, waxaana lagu soo ururin karaa guriga. Ovoskop waxay muujinaysaa in jeermiska ukunta, haddii uu qolofku yahay dharka, baaxadda iyo meesha uu ku yaal qolka hawada.
Sidee loo sameeyaa baaritaanka qafisashada guriga adiga oo isticmaalaya gacmahaaga:
U qaado sanduuq kasta ama sanduuqa jilicsan ee cabbirka yar.
Nalalka iftiinka iftiinka ayaa lagu rakibay gudaha sanduuqa (si loo sameeyo tan, waa in god la saaro dhinaca sanduuqa loogu talagalay kaararka korantada).
Xadhkaha korontada iyo fiilada loogu talagalay guluubka shabakada waxay ku xiran tahay haraaga dabka.
Ka dabool daboolka sanduuqa, gooyaa daloolka qaabka iyo cabbirka ukunta. Maadaama ay ukunku ka duwan yihiin (goose - waaweyn, digaag - yar), daloolka waxaa lagu sameeyaa ukunta ugu weyn (goose). Si ukumo yaryar oo aan u soo dhicin meel dalool weyn leh, dhowr xargo oo khafiif ah ayaa cidhiidhi u ah sida substrate.
Eeg jeermiska lagu hayo qol mugdi ah! Ka hor inta aanad bilaabin shaqada waxaan nalalka nalalka ku soo jeedinaa shabakadda (sanduuqa ayaa iftiiminaya gudaha). Ukunta waxaa lagu dhajiyaa daloolka daboolka sanduuqa iyo turjumaanka si loo hubiyo ku habboonaanta.
Ma taqaanaa? Waxaa lagu dooday in heerkulka ay digaagdoodi ay saameyn ku yeesheen jinsiga mustaqbalka. Tani ma aha run, sababtoo ah saamiga caadiga ah ee digaagga digaagga iyo barkimada waa 50:50.
Daaqada muujinta daboolka sare ee qalabka waxay muujinaysaa heerkulka gudaha gudihiisa. Waxaad sameyn kartaa heerkulka aad rabto adiga oo isticmaalaya laba badh ah (ka yar ama ka badan) oo ku yaal bandhigga. Hal guji ee batoonka la rabo waa tallaabo ah 0.1 ° C. Bilawga shaqada, heerkulka ayaa la dejiyaa maalinta ugu horeysa ee isugeynta, ka dib markii qalabku uu tago saacad badhkeed si loo diiriyo isla markaana u dejiyo heerkulka si joogto ah.
Heerkulka heerkulka ee ukunta digaagga:
37.9 ° C - laga bilaabo tan ugu horraysa ilaa maalinta lixaad ee isugeynta;
laga bilaabo maalinta 6 ilaa iyo shan iyo tobnaad - heerkulka ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaya (iyada oo aan la jarin boogo fiiqan) ilaa 36.8 ° C;
Laga bilaabo 15-ka illaa 21-aad, heerkulka si tartiib ah iyo si siman ayuu hoos u dhacaa maalin kasta ilaa 36.2 ° C.
Marka aad fureyso daboolka sare ee qalabka, waxaad u baahan tahay inaad si ku meel gaar ah u damiso hawada, sababtoo ah waxa ay keentaa socodka hawada cusub, qabow adigoo hoos u dhigaya heerkulka gudaha gudihiisa. Shuruudaha isugeynta noocyada kala duwan ee shimbiraha:
digaagga - 21 maalmood;
berriga - laga bilaabo 28 ilaa 30 maalmood;
ducks - laga bilaabo 28 ilaa 33 maalmood;
xamaam - 14 maalmood;
turkiga - 28 maalmood;
Gacmaha - laga bilaabo 30 illaa 37 maalmood;
boodhadh - 17 maalmood;
duurjoogta - laga bilaabo 40 ilaa 43 maalmood.
Macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan taranta noocyada kala duwan ee digaagga waxaa laga heli karaa suugaanta gaarka ah.
Maxay tahay inay wanaagsan tahay, oo ku haboon ukunta ilaysiinta:
qolka hawadu waa inuu ahaado mid dhab ah qaybta caanaha, iyada oo aan barokacayaal;
ukumaha oo dhan waa suurad wacan si ay u qaataan cabbirka dhexdhexaadka ah (tani waxay ku siin doontaa hal mar-naklev);
Foomka caadiga ah (dheer ama wareegsan oo aan ku haboonayn);
Waxyeello u geysanin qolofka, lebiska ama noduleska;
miisaan wanaagsan (52-65 g);
iyada oo si muuqata u muuqata embriyaha O-qaabeysan iyo mugdi madow gudaha;
Baaxadda 3-4 mm dhexdhexaad ah.
Lagama maarmaanka u ah qaboojinta:
ukumaha oo laba xabbadood oo xabbo ama jaallo ah aaney dhammaan;
ku burburin jariidhada;
barakicinta qolka hawada ama la'aanta;
Haddii beerta digaaga ay bixiso dareen ku filan oo lagu dooranayo ukunta, markaa shimbir yar oo caafimaad leh ayaa ku dabooli doonta calool yar, jilicsan oo jilicsan.
Ka hor intaan la dhigin ukumaha kuleylaha, waxay u baahan yihiin in lagu calaamadeeyo qalin fudud oo leh ulo jilicsan: geli nambarka "1" hal dhinac, ku calaamadee geeska labaad lambarka "2". Tani waxay ka caawinaysaa dhirta si loo xakameeyo isdaba-marinta ukumaha. Tan iyo kululaynta waa la jarjaray oo heerkulku wuxuu u dhigmaa heerkulka la rabay, beerta digaagga ayaa keligood qortaa. Waxaa lagama maarmaan ah in la xiro heerkulku ka yimaado shabakada oo fur furka qalabka. Qalabka wax lagu kululeeyo waxaa lagu dhajiyaa baalal-caag ah oo caag ah si loo tiriyo lambarka "1" ee ukun kasta oo kor ku xusan. Daboolka qalabka waa la xiray, kareemkuna wuxuu ku xiran yahay shabakadda.
Talooyin ku saabsan xaddidaad:
Waa lagama maarmaan in la dhigo dameerka ka dib 18:00, taasi waxay u oggolaaneysaa in ay riixdo ilaa barkada (inta lagu jiro maalinta ay fududdahay in la xakameeyo hirgelinta chicks).
Milkiilayaasha moodooyinka leh si gaabis ah u dhigista baahida loo qabo in la dhigo ukunta loogu talagalay in lagu xoojiyo caarada caarada leh ee kor ku xusan.
Waxaa suurtagal ah in la bixiyo ukun simultane ah adoo dhigaya ukumaha qalabkaas - ugu weyn ee hal mar, markaa kuwa yar yar iyo dhamaadka kuwa ugu yar. Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo mudada afarta saacadood ee u dhaxeysa tabsiyada badan ee ukunta kala duwan.
Heerkulka biyaha ku shubay digsiga waa inuu ahaadaa + 40 ... +42 ° C.
Waa muhiim! Kobcinta waa in ay dhowr jeer ku soo noqotaa inta lagu jiro maalinta, iyada oo ay u dhaxeyso ugu yaraan 4 saacadood iyo wax ka badan 8 saacadood inta u dhexeysa daaweynta.
Xeerarka iyo geeddi-socodka maskaxda
Inta lagu jiro geeddi-socodka oo idil, beerta digaaga ayaa u baahan in la ilaaliyo qalabka. U qabashada waxqabad kasta oo ku dhexjira qaboojiyaha, waxaad u baahan tahay inaad ka jarto fiilooyinka korantada ee korontada iyo xakameyaha heerkulka.
Hawlahani waa inay qabtaan:
Ku dar biyo diirran maskaxda si gaar ah loogu talagalay, sida daruuriga ah (ku shub biyo gabbasho, iyada oo aan laga saarin ukumaha la dhigo iyada oo loo marayo surooga shaaha);
u beddel heerkulka si waafaqsan jadwalka kuleylka ee maskaxda;
haddii qalabku uusan bixin shaqeyn aftahan ah, ka dibna beerta digaaga ayaa gacanta ku haysa ama isticmaalaya qalab farsamo.
Si ay ukumo u noqoto mid aan waxyeello u geysan geeddi-socodka, waxaa lagu talinayaa in lagu beddelo habka isbedbedelka - calaacalaha ayaa la geliyaa laynka ukunta waxaana loo sameeyaa hal wareeg dhaqdhaqaaq, taas oo ka dhalatay halkii lambarka "1" lambarka "2" noqda muuqaal.
Qodobbada leh fiilada farsamada - ukunta ayaa ku haboon unugyada birta birta ah. Si loo soo celiyo agagaarka, shabaqa waxaa loo rogay dhowr mitir, ilaa uu ukumo dhameeyo oo lambarka "1" waxaa lagu bedelay lambarka "2".
Xadhiga gawaarida ah
Qaababka mashiinka dhejiska ah ee gawaarida gawaarida ah ayaa loo rogaa iyada oo aan wax-ka-qabashada aadanaha. Qalabka wuxuu sameynayaa ficilkaas lix jeer maalintii. Mudada udhaxaysa inta u dhaxaysa 4 saacadood. Waxaa lagugula talinayaa inaad gacantaada ka qaadatid qadarka dhexe ee hal mar maalintii oo aad ku beddesho kuwa ku yaala safafka ugu dheer. Supercooling ee ukunta la dhigay si adag lama ogola. Marka qalabka gacanta lagu soo afjaro waa la dhammaystiray, qalabku wuxuu daboolayaa dabool leh oo ku xiran shabakadda. Ka dib 10-15 daqiiqo, heerkulka waxaa lagu soo celiyaa qiimaha go'an ee bandhigga.
Waa muhiim! Dhamaadka maalinta 15-aad ee soo-qabsashada, ukumo ma soo celin! Arbacada maalinta 16-aad, waa inaad xirto qalabka PTZ ee qalabkaas oo si toos ah loogu siiyay.
Horumarinta embriyaha waxaa lagu hubiyaa baaritaanka laba jeer inta lagu jiro wacyiga:
Ka dib todobaadkii isugeynta, maaddadu waxay u muuqataa iyada oo loo marayo baakidhka, xiligan meeshan mugdiga ah waa in si cad loo arki karo - tani waa hormoon soo koraya.
Nidaamka labaad waxaa lagu sameeyaa 12-13 maalmood laga bilaabo bilowga qashinka, qoorta waa in uu muujiyaa mugdi buuxa gudaha qolofka - taasi waxay ka dhigan tahay in nuujintu si caadi ah u koreyso.
Ukumaha, horumarinta waxyaalaha wax khaldamay - waxay noqonayaan kuwo dhalaalaya marka la eegayo baaritaan, waxa lagu magacaabaa "sheeko". Joonisku ma dabooli karo iyaga, waa laga saaraa masraxa.
Burburinta qolofta chicks waxay ku dhacdaa qayb ka mid ah ukunta (ukunta) ee ukunta - halkaas oo qolka hawada bilaabmaa.
Haddii, ku xad gudubka waqtiga maskaxda, chicks-ka ayaa kiciyay hal maalin ka hor intaan la filayn, ka dibna milkiilaha qalabkani waa inuu dejiyaa heerkulbeegga hoos u dhiga 0.5 ° C qaybta soo socota ee soo-saaridda. Haddii gu'gu dillaacay maalin ka dib, heerkulka waa in la kordhiyaa 0.5 ° C
Waa maxay sababta ay digaagga jirran ugu dhejiyeen:
Sababta looga saaray maqnaanshaha digaagga aan fiicnayn, digaagga daciifka ah waa ukunta liita;
haddii heerkulka kuleylaha aan la fiirin, digaagga digaagsan ayaa noqon doona "wasakh"; heerkulka ka hooseeya kan ku tiirsan, xubnaha gudaha iyo xuddunta shimbiraha ayaa noqon doona cagaar.
haddii laga bilaabo 10 ilaa 21 maalmood qoyaanka gudaha qalabku wuu sarreeyaa, digaagga ayaa billaabanaya inuu dhexdhexaadiyo bartamaha qolofka.
Waa muhiim! Si ukumaha digaaga iyo gooska (sababtoo ah qolofka aan adka ahayn iyo qolofka adag), laba jeer maalintii buufinayaa biyo.
aaladaha, halkaasoo ah 12V heer-kuleyliye, ayaa ku xiran batteriga;
Isku-xireyaasha aan ku xirneyn bateriga waxay u baahan yihiin in lagu duubo bustayaal diirimaad oo dhowr qol oo diiran.
Heerkulka qolka aaladu ku taal waa in uusan hoos udhicin +15 ° C Haddii ay sidani dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad xirto godka hawo-qaboojiyaha.
Laga bilaabo hawlgalka "Hibiska Fiican", waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u barato naftaada sida loo isticmaalo kiniisada guriga:
ha isticmaalin qalab kaas oo fiilada korontada, fiilada ama kiisku uu khalad yahay;
looma oggola inay furto qalabka ku jira shabakadda;
ha ku rakibin ilo ku dhow ilaha dabka furan;
ha ku fadhiisan qalabka waxna ha ku ridin daboolka sare;
dayactir ku samee heer-kuleylaha ama qaybaha wareegga iyada oo aan la-talin khaas ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida naftaada loo sameeyo: guri, digaag digaag ah, iyo warshad ka soo qaboojiye jir ah.
Kaydinta aaladaha ka dib markaad hirgeliso
Dhamaadka kuleylka, waxaad u baahan tahay inaad ku dhaqdo kiiska qalabka (gudaha iyo dibedda), gawaarida ukunta, boogaha, heerkulbeegga iyo qaybaha kale ee kuxiran oo ku lifaaqan ee kiniisada oo leh xal daciif ah ee kaneecada. Qalabka oo dhan qalaji, ku rid sanduuqa oo ku kaydi ilaa xilli-xiga ee qolka leh heerkul fiican (guriga dhexdiisa, hudheelka).
Iyada oo la barbardhigayo qiimaha digaagga iyo walxaha kulubka, isagoo dhexgaley dhammaan faa'iidooyinka iyo waxyaabaha ay ka helayaan qalabku dammaanad qaadayo - inta badan beeralaydu waxay samaynayaan go'aanka ah inay iibsadaan xakameyn "Layaabka ugu fiican". После того, как изучена инструкция по применению, начат и правильно проведен процесс инкубации - на 21-й день птицевод получит юное пополнение своего птичника. Здорового вам молодняка!